Semalt: Indlela Enhle Yokudabula Iwebhusayithi
Iwebhusayithi ye-Scraping akuyona umsebenzi onzima. Kukhona ochwepheshe abaningi namuhla abawazi kahle ukuthi bangasiza kanjani abasebenzisi ukuqoqa yonke idatha abayidingayo ngokuchofoza inkinobho eyodwa. Kuyindlela entsha futhi ephumelelayo, futhi abasebenzisi abaningi bewebhu bayisebenzisela ukuqoqa lonke ulwazi olunolwazi ukuze banqobe abancintisana nabo futhi baqinise ukusebenza kwenkampani yabo. Eqinisweni, bangathola idatha eminingi, njengezinhlu zoxhumana nabo, amanani, imikhiqizo nokuningi okuningi.
Inhloso ye-Web Scraping
Ngaphambi kokukhipha amakhasi ahlukahlukene ewebhu, abasebenzisi kudingeka babe nombono ocacile ngokuthi yikuphi ngempela ukukhwa kwewebhu okusetshenziselwa. Lokhu kusho ukuthi ukuklabhuza iwebhu kuyindlela yamanje yokwenza abaphathi bakwazi ukuthola lonke ulwazi abaludinga ngokusebenzisa izinhlelo ezahlukene zekhompyutha. Ngale ndlela bangakwazi ukukhipha idatha ngendlela elula futhi ngaphandle kokuchitha isikhathi.
Eminyakeni eminingi edlule, abantu kwakudingeka bakhiphe yonke idatha kusuka kuwebhusayithi ngesandla. Kwakungeyona indlela elula kusukela ama-web scrapers kwadingeka asebenzise amahora amaningi noma ngisho nezinsuku, ukuze athole okuqukethwe ababekufunayo. Kodwa kwakungeyona into engenakwenzeka kubasebenzisi abaningi bewebhu nabahleli ngoba kwakungasebenzi kakhulu.
I-Tech entsha neyenziwe ngokuzenzakalelayo
I-Web scraping iyithuluzi elikhulu elinganikeza imiphumela emihle kubasebenzisi bayo ngesikhathi esithile. Eqinisweni, abaseshi bewebhu bangathola yonke idatha abayifunayo ngokuchofoza okukodwa. Bangagcina isikhathi namandla, futhi baqiniseke ukuthi bazokhipha izibalo eziqondile abazifunayo ngaphandle kwamaphutha. Kungakapheli imizuzwana nje, bangakwazi ukucubungula amakhasi amaningana omkhiqizo bese bethola imiphumela edingekayo. Imiphumela
Imiphumela ephumelelayo ngokuchofoza nje kwebhokisi
Ngokuchofoza nje inkinobho, abasebenzisi bangakwazi ukushaya iwebhusayithi imiphumela abayifunayo. Akudingeki baphume futhi benze noma yikuphi ukucwaninga emakethe. Kunalokho, bangathola lonke ulwazi oludingayo kusuka kukhompyutha yabo.
Indlela I-Web Scraping Benefits Market Today
Inqubo yokuqoqa i-web kubaluleke kakhulu kubantu abaqhuba amabhizinisi. Bangakwazi ukukhipha futhi basindise inani elikhulu lokuqukethwe ngesikhathi esithile futhi bagcine kumafayela. Kuyinkimbinkimbi enkulu yezimayini zedatha ezinikezela amathuba abasebenzisi bayo.
I-Web scraping isiye indlela ethandwa kakhulu ikakhulukazi kubanikazi be-e-izitolo nabalingani babo. Kungenziwa kalula futhi unikeze ithuba kubaphathi nabahlobo ukuhlaziya izintengo nemikhiqizo kangcono. I-Web scraping yenziwa uhlelo lwekhompiyutha, olusebenzisa izinhlelo ze-scraper ukuze kukhishwe okuqukethwe kumawebhusayithi ahlukahlukene Source .